नबिल बैंकका शेयर धनीलाई बम्पर बोनस - Arthik Sandesh नबिल बैंकका शेयर धनीलाई बम्पर बोनस - Arthik Sandesh
काठमाडौं–नबिल बैंकको ३७ औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीलाई ३८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकको साधारणसभाले ३३.६० प्रतिशत बोनस शेयर र ४.४० प्रतिशत नगद लाभंश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मुनाफा हासिल गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ। बैंकले जेथामा प्रतिफल १५.१९ र प्रति शेयर आम्दानी ३३.५७ हासिल गरी आफ्नो वासलात विस्तार गर्दै २ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको बताइएको छ । मुनाफाबाट प्रस्तावित बोनस शेयर प्रस्ताव बैंकको पुँजी १८ अर्ब ४९ करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ ।
साधारणसभामा बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले न्यून कार्बन अर्थतन्त्र, दीगो तथा समतामूलक भविष्यको लागि रणनीतिक रुपमा ग्रिन फाइनान्सिङ र क्लाइमेट चेन्ज फाइनान्सिङमा बैक थप लगानी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । साधारणसभाले संस्थापक शेयरधनीबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई संचालक समेत चयन गरेको छ। साधारण सभाले उदय कृष्ण उपाध्याय र एनबी (ईन्टरनेशनल) लि. लाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपेन्द्र प्रसाद पौडेललाई निर्बिरोध निर्वाचित गरेको जनाएको छ ।
बैंक संचालक समितिको ५८८ औं बैठकले संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः उपेन्द्र प्रसाद पौडेललाई चयन गरेको छ । बिज्ञप्तीमार्फत बैंकले एकसय ३५ वटा शाखाहरु, एकसय ८७ वटा एटिएम र १५ सयभन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्टहरुका साथमा देशव्यापी रुपमा र विश्वभर धेरै एजेन्टहरु मार्फत सेवा प्रदान गरेर आफ्ना सबै सरोकारवालाहरुसंग संगै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
हिजो दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा आज सामान्य सुधार
काठमाडौँ- बुधबार नेप्से सूचक सामान्य अंकले बढेर बन्द भएको छ। अघिल्ले दिन ८४ अंकले घटेको नेप्से सूचक बुधबार ८.९० अंकले बढेर २२७४.४२ विन्दुमा पुगेको छ। बुधबारको बजार...
भोलीदेखि सवारी चालक अनुमतीको लागि आवेदन खुल्ने
काठमाण्डौ । लामो समयदेखि रोकिएको सवारी चालक अनुमती पत्र आवेदन जेठ ५ गते बुधबारबाट खुल्ने भएको छ । अहिलेको ब्यवस्था परिमार्जन गरेर नयाँ भुक्तानी प्रणाली सहित आवेदन खुलाउ...
प्रिओपन सेसनमा घट्यो नेप्से
काठमाण्डौ । बुधबार नेप्से परिसूचक प्रिओपन<...
रेणुले बनाइन् २ हजार २ सयको अग्रता
भरतपुरमा रेणुको २ हजारको अग्रता
बालेनको मत १७ हजारमाथि,मतान्तर कति ?
फेरिपछि परिन् रेणु,कति छ मतान्तर ?
बालेनले कटाए ५ हजार मत, पछिल्लो ताजा अवस्थामा यस्तो छ मतपरिणाम
चितवनमा मतगणना रोकियो
चितवनमा रेणु पछि परिन्,मतान्तर कति ?